PRESIDENT oh, Chef Suprême de l'armée ianao...Biraon ny POLISY eto an drenivohitra mbola mampiasa MACHINE A ECRIRE
Date: 28 août 2017 - 08:26
so de tsy rariny,ela b ny servic,aiza ilay technologie arahina!!!
Re: PRESIDENT oh, Chef Suprême de l'armée ianao...Biraon ny POLISY eto an drenivohitra mbola mampiasa MACHINE A ECRIRE
Date: 28 août 2017 - 08:47
Sao dia ny ruban kosa no efa maina dia tsy manoratra tsara e.
Ny machine manko tsy ilaina courant ka na misy delestazy aza afaka miasa ihany ny olona
F'angaha ko asana prezida ny manolo ny fitaovan'ny polisy fa tsy ny mindef?
Aoka ny prezida hajaina tsy ho rebirebena amizany f'efa maro ny asa sahaniny a,
Date: 28 août 2017 - 09:38
kanefa efa 1/5e budget de l'ETAT efa natobaka manontolo ho an'ny ministeran'ny fiarovana o o o
eo @ 950 milliards ARIARY eo ho eo ny budget an'ny ministère de la défence o o o
Dia mbola nampiana 60 milliards ARIARY io vola io ho an'ny taona 2018.
Ny ministère de la défence dia tsy misahana ny fandriampahalemana anatiny (ambanivohitra sy ambonivohitra) fa ny gendarmerie sy ireo polices (nationales sy municipales) no misahana izany.
Date: 28 août 2017 - 10:21
Ny fijeriko azy dia izao an!
Tsy hoe ny budget hividianana ordinateur na ohatran'izany no tsy misy fa domination moral ho an'ireo izay olona mandalo amin'ny poste de police ilay izy. Ilay feon'ireo mikapokapoka be mihitsy no hilaina mba ho tafapaka tsara any an-tsain'ny voapanga sns... ao efa manakaiky ny fonja izy.
Mitovy amin'ny hoe maninona ny fonja no tsy mba misy fanatsarana????, satria natao ho ratsy mihitsy ny any mba hisy hisainan'izay efa nandalo tany.
Date: 28 août 2017 - 10:44
ôtran'ny mifanipaka le bus intelligent sy le commissariat mampiasa machine a ecrire
Date: 28 août 2017 - 10:53
ka ilaozan zalah mikapokapoka machine à écrire izany de tsy manenjika mpangalatra. lany ftoana
Date: 28 août 2017 - 11:56
Maty kosa ilay usine mpanaboatra ruban raha soloina solosaina ilay milona mikapokapoka e.
Aleho ihany ireo no ftaovany ao prezida fa ra omenao PC reo hamidiny etsy @ petite vitesse grand bouchon etsy Isotry ny PC nao prezida a.
Efa 5 ème puissance isika izao fa gasy ka manja prezida de ho fidinay njay enao amy 2018 prezida mamimbahôka ô
Date: 28 août 2017 - 12:26
Tsy misy dikany izay masinina à ecrire ,fa 20km miala ny renivohitra dia mbola misy ankizy epp mianatra amin'ny tany velarana tsihy ,tsy misy tabilio na latabatra .
Date: 28 août 2017 - 12:42
Tsy dia atao mahagaga loatra raha toa ka tsy nanaiky ry zareo mba tsy ny ministry ny vola no mitantana ny budget-ny fa aleo izy samy izy ihany ...
Eritrereto fa 950 milliards ariary / taona izany anie ka tsy misy investissement ataon'ireo akory ... tsy mividy fitaovana fiarovana akory zareo fa TANK t@ 1960 no mbola entina manao matso rehefa 26 juin ... fa asa angaha atao ino aby.
Date: 28 août 2017 - 13:18
Vakio tsara ity : privatiser-na ny fampiasàna ny volam-panjakàna (volam-bahoaka izany) .
Ny fotodrafitrasa rehetra tokony natsaraina na natsangana (sekoly, hopitaly, na arabe) dia tsy hisy ary hia-ratsy satria efa nahodina any amin'olombitsy ny vola -> jereo raharaha klôdine : iza no nanao sonia hanomezana ny vola hoan'i klôdine ? Nahoana i Solonandrasana no tsy sahin'i rajao ny manala azy ? Rehefa voavaly ireo dia mazava amin'ny rehetra ny ketrika maloto eto Madagasikara!!
Date: 28 août 2017 - 15:36
950 milliards ariary / taona izany anie ka ao anatony ny karaman'ny ireo jeneraly bobaka be ireo e! aza adino.
Date: 28 août 2017 - 18:15
ka aiza ndray no ahita 125M hanaovana sarin'ady raha hividy lamasina a ekrira
ento am bavaka
Date: 12 septembre 2017 - 16:09
Ianareo izay nahita à la une l'Express omaly, mampalahelo ny mahita zandary any ambanivohitra nefa manao kapa scoubidou. Ireo alefa handrava fihetsiketsehana sy fanehoan-kevitra nefa tena ampy fitaovana sady ampy effectif.
Date: 12 septembre 2017 - 18:05
Izany hitanareo izany ary mbola manao kapa ,fa matetika izahay eny amin'ny lalana halehanay eny misy mandeha pieds nus ,fa tsy misy budget ny brigadin'dry zalahy ,ary ny sakafo tsy zarizary any ka indraindray dia mitady hevitra ry zalahy ,ahazoana vola eny fa na dia hisakafoanana fotsiny ary .Tena mampalahelo be ny mijery an dry zalahy satria ny asa mafy ,ny fitaovana tena tsy halehany mihintsy .
Date: 12 septembre 2017 - 18:57
Ny ahy zao ny boky vakiko mba Lala sy Noro kno!